I-Nintendo switchch vs switch Lite - Yikuphi Okufanelekile? - Ukudlala
I-Nintendo switchch vs switch Lite - Yikuphi Okufanelekile?
Ngakho-ke ufuna ukuthenga iSwitch, kepha yiluphi uhlobo okufanele uluthenge - Shintsha vs Shintsha i-Lite?Esikhathini sanamuhla sokuncintisana okunzima phakathi kwezinkampani ezinkulu, uNintendo ukwazile ukukhipha okuhlukile. Ukudlala okuphathekayo, kubuyisa izinsuku ezinhle zakudala. Ingxenye emnandi manje usungadlala kakhulu izihloko ze-AAA kudivayisi ephathekayo.
Ungakhathazeki, kule ndatshana sizobe sihamba kuzo zonke izizathu zokuthi iyiphi okufanele uyithenge, futhi ekugcineni, sizomemezela onqobile.
Uthi bewazi? I-Nintendo switchch 2 - Usuku lokukhishwa, ama-Specs & Leaks
I-Nintendo switchch vs switch Lite - Usayizi Ukuqhathanisa
1. Shintsha Usayizi Ukuqhathanisa
Uma kuqhathaniswa nezinye izingqungqulu ezinkulu ezifana ne-Sony's PS5 ne-Xbox Series, i-X Nintendo Shintsha ukubonga okuncane okumangazayo kubasebenzisi bayo besayizi abanjengethebhulethi abakwazi ukupakisha kancane futhi kungadingeki bakhathazeke ngokuthwala ibhokisi elikhulu. Ngeshwa, iSwitch ayincane kangako ukuthi ungazulazula uyiphethe emaphaketheni akho; ungahle uthande ukuthatha ikesi noma ulibeke etafuleni.
2. Shintsha ukuqhathanisa kwe-Lite
I-switchch Lite incane kunemodeli ejwayelekile kepha hhayi ngemajini enkulu. Kukhulu ngokwanele ukuvumela ukubukwa kwe-720p kuchume, futhi njengoba igama lisho, isisindo sayo singaphansi kwe-switch ejwayelekile. Ikhonsoli isazizwa ikhululekile ezandleni zakho ngaphandle kokuyiphatha i-heft ye-predecessor. Ngaphezu kwalokho, i-lite incane ngokwanele ukuthi inganela kunoma yiluphi uhlobo lwephakethe.
I-Best Minecraft Imibono Yesikhumba
I-Nintendo switchch vs switch Lite - Okubonakalayo
1. Ukubukwa kweNintendo Shintsha:
Sonke sifuna ukuthi imidlalo yethu ibukeke ibangcono kakhulu ngangokunokwenzeka, futhi ngenkathi ingasekeli ukuxazululwa kwe-4k, iSwitch iyakwazi ukwenza imidlalo iphile ngezindlela ezimbili ezihlukile. Uma ikumodi ephathekayo, i-console ingakwazi ukuxhasa ukulungiswa kwesikrini okungafika ku-720p, okuphakeme ngokumangazayo kunokubanjwa ngesandla kwangaphambili kukaNintendo. Kodwa-ke, imidlalo icwiliswa kakhulu uma iSwitch isimile ethekwini laso. Ngokuxazululwa okungu-1080p okuhlazisayo, izwe elihle kakhulu likaNintendo liphila ngemininingwane emihle.
2. Shintsha okubonakalayo kwe-Lite
Uma ungenandaba nokukhuphuka kokubonwayo futhi usafuna i-switch, mhlawumbe kufanele ubheke ukuthola i-lite. Isixazululo esiphakeme kakhulu esingakhonjiswa yiNintendo switchch lite ngu-720p. Uhlelo aluyisekeli imodi ye-TV, kanti imodeli ejwayelekile iyayisekela. Ngokuphambene, imidlalo ibukeka yinhle ngokwanele kwimodi ephathekayo. Kunezihloko ezithile okufanele uzizwe esikrinini esikhulu. Ngakho-ke ukulahleka kwekhwalithi yokuqhafaza kunzima ukukucacisa.
I-Nintendo switchch vs switch Lite - Intengo Yentengo
Shintsha Intengo -
Ama-Consoles angabiza kakhulu, futhi iSwitch ngokuqinisekile ayinjalo. Imodeli ejwayelekile iphethe inani lentengo eliphakeme le-AmaRandi angama-300 aseMelika, ezungeze inani elifanayo nabancintisana nabo, i-Xbox ne-PlayStation. Kunzima uma ucabanga ukuthi iSwitch ingaba yikhonsoli yasekhaya kanye ne-handheld, ngakho-ke lesi yisivumelwano impela.
Shintsha uhlelo lweLite -
Uma ufuna ukonga imali ethile. Ukushintsha i-lite kungaba yindlela oyifunayo. Ngeshwa, iLite iza nemihlatshelo embalwa. I-Idola laseMelika elingu-200Ithegi lentengo lihle kakhulu kubhajethi, kepha awutholi ama-bang amaningi ngemali yakho. I-lite ayinayo i-joy-cons etholakalayo futhi kunalokho ibakhe ngaphakathi kwekhonsoli, ngakho-ke uthola isilawuli esisodwa. Uma ufuna ukudlala imidlalo ethile nabangani bakho, kufanele ubheke amaphakethe amabili wenjabulo. Ngemuva kokuzithenga, ucishe wasebenzisa imali efanayo njengoba uzoyisebenzisa ku-switch ejwayelekile.
INintendo Shintsha vs Shintsha i-Lite - Impilo yebhethri
Shintsha impilo yebhethri -
Esikhathini lapho ukuthwala kuyikho konke, impilo yebhethri ibaluleke kakhulu kunangaphambili. Akukho okucasulayo njengokudlala umdlalo ihora noma amabili kuphela ukuze uhlangane nesaziso sebhethri esincane. Ekuqaleni, iSwitch ejwayelekile ibingenayo impilo yebhethri engajwayelekile. Kwakuhlala phakathi kwamahora amabili nohhafu kuya kwayisithupha nohhafu. Ngenhlanhla, uNintendo wakhipha inguqulo entsha yemodeli ejwayelekile phakathi kukaJulayi no-Agasti 2019 enempilo yebhethri ende. Ihlala phakathi kwamahora amane nohhafu kuze kushaye amahora ayisishiyagalolunye. Leso yisikhathi esincane somdlalo ukukhama ngokwanele ukuhlala ntambama yonke.
Shintsha iLite Battery Life -
Nakulokhu futhi, ukuthola i-Lite konke kuya ngokuthi usisebenzisa kanjani isikhathi sakho udlala. Uma ungahlali ngokuchitha isikhathi eside ntambama usebenzisa umdlalo onenyama, lapho-ke ungahle ungabi nandaba nempilo yebhethri ye-lite. Ukuvaleka phakathi kwamahora amathathu kuya kwayisikhombisa, i-lite inesikhathi esincanyana kune-switch ejwayelekile, kepha ingcono kancane kunemodeli yoqobo. Uma kushiwo lokho, i-lite ingcono kakhulu kini eningachithi amahora amaningi nibheka okuthile njengophawu lomlilo izindlu ezintathu. Lokhu kungaba ngcono ekugibeleni imoto ende noma uma udinga ukubulala ihora noma amabili. Lokhu konke kubila ekuthandweni komuntu siqu.
I-Nintendo switchch vs switch Lite - Ukuqhathaniswa kokuphatheka
Shintsha ukuthwala -
Cabanga ngalokhu, udlala iSwitch yakho wedwa, bese kufika umuntu ongamazi abuze ukuthi bangadlala yini. Ngenxa yokutholakala kwenjabulo, unikeza eyodwa kumuntu ongamazi futhi ujabulele imidlalo embalwa evusa inkanuko ngaphambi kokuba bahambe. Leli elinye lamaphuzu wokuthengisa abaluleke kakhulu weSwitch. Mhlawumbe isizathu esiyinhloko esenza abantu abaningi babambe eyodwa. Izilawuli ezimbili eziphindwe kabili njengoyedwa kube sengathi lokho bezinganele. Ukushintshwa okujwayelekile kufaka phakathi i-kickstand, ngakho-ke ungasetha ikhonsoli ngaphandle kokuthi uyihambise kunoma yini. Kuphola kanjani lokho?.
Shintsha ukuthwala kwe-Lite -
Ngeshwa, yilapho i-lite yehluleka ukujabulisa khona. Njengoba sishilo ngaphambili, izinjabulo zakhiwe ku-console. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukudlala nabanye ngesikhashana. Ngaphezu kwalokho, izinjabulo ezakhelwe ngaphakathi zenza imidlalo ethile efana neSniffer Cliffs neSuper Mario Party cishe kungadlalwa. Ngenkathi i-Lite ivumela injabulo ejwayelekile yokuxhuma ku-console, isistimu ayinayo i-kickstand. Okusho ukuthi kuzofanele udlale i-lite-on a flat flat. Noma uyiqhamukele kokunye. Ngamanye amagama, ukusetha kuyinkinga. Awukwazi ukusebenzisa idokhu yokushaja ne-lite ngoba ayisekeli imodi ye-TV. Ngokudabukisayo, i-switchch lite ilahlekelwe yilokho okwenza iSwitch ibe yinto okumele ibe nayo.
Owinile Usayizi -Shintsha i-Lite
Owinile ngokubonakalayo- Shintsha
Owinile Intengo- Shintsha i-Lite
Winner Life Battery- Shintsha
Umnqobi Wokuphatheka- Shintsha
Njengoba ukwazi ukubona, iNintendo Shintsha iyinqobe ecacile. Kuzo zonke izici, iNintendo inganqoba; noma i-switchch lite iyinani elincane kakhulu, i-switchch inenzuzo impela. Ngabe usacabanga ukuthola i-lite? Noma sikuthengise ku-switch ejwayelekile. Sazise ukuthi iyiphi imodeli ohlela ukuyithola kumazwana angezansi.
Amanga Akho ngo-Ephreli Isizini 2: Izinto Odinga Ukuzazi!
I-Zerozerozero Isizini 2 : Ingabe Iqinisekisiwe Ngesizini Elandelayo?